ဟင်းချက်နည်းများ Archives - Page3of3- Latest Myanmar News
May 3, 2020 Latest Myanmar News 0
ဝက်စတူးချက်နည်း ဝက်စတူး ချက်ဖိုိ့ လိုအပ်တာလေးတွေ 1.ဝက် သုံးထပ်သား(သို့)ပေါင်သား၅၀သားအတုံး ၁ တုံး 2. ဆီ – ၂ ဇွန်း 3. အညိုရောင် သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းခွဲ 4. အခွံမခွါပဲ ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ အတက်ကြီး – […]
April 29, 2020 Latest Myanmar News 0
ကြက်ဥကိုစပြုတ်ပါ သစ်ကြ​ပွေး​ခေါက်/နံနက်ပွင့်/လက်ဖက်ခြောက်/နံနက်​စေ့/ကုလား​ပွေးရွက် /သကြား/ပဲငံပြာရည်အ​နောက်/ဟင်းခက်မှုတ် ထည့်​ပေးရပါမည်……ဆားမထည့်ပါနဲ့…ပဲငံပြာ​ရည်အ​နောက်ထည့်ရုံနဲ့တင်ရပါပြီရှင့် ရေ​နွေးဆူဆူထဲ ထည့်ပါ….. ကြက်ဥပြုတ်ကို အခွံအက်​အောင်ခွဲ​ပေးပါ ခုန ​ရေဆူဆူထဲထည့်ပြုတ်​ပေးပါ….ပြုတ်​နေရင်း​တောင်အနံအရမ်း​​မွှေးလို့…စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူး ရေအပြည့် နှစ်​ရေခန့်ပြုတ်​ပေးပါ…..တညပြုတ်​ရေနဲ့နှပ်ထားပြီးရင် စားလို့အရမ်း​ကောင်းတဲ့လက်ဖက်ကြက်ဥရပါပြီ……. လက်ဖက်ကြက်ဥပြုတ်………….ကိုယ်သိသလောက်လေးလုပ်ပြတာပါ…. အိမ်မှာနေရင်း ….အစား​အသောက်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါ​စေ……. Daw Mon Unicode ကွကျဥကိုစပွုတျပါ သဈကွ​ပှေး​ခေါကျ/နံနကျပှငျ့/လကျဖကျခွောကျ/နံနကျ​စေ့/ကုလား​ပှေးရှကျ /သကွား/ပဲငံပွာရညျအ​နောကျ/ဟငျးခကျမှုတျ ထညျ့​ပေးရပါမညျ……ဆားမထညျ့ပါနဲ့…ပဲငံပွာ​ရညျအ​နောကျထညျ့ရုံနဲ့တငျရပါပွီရှငျ့ ရေ​နှေးဆူဆူထဲ […]
ကယ်လိုရီမပို ငါးဖယ်ဂေါ်ဖီပေါင်းလေး လုပ်စားမလားဟေ့ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ငါးဖယ် (သို့မဟုတ်) ကြက်သား ( နှစ်သက်ရာ ) ဂေါ်ဖီ ဥနီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ / နီ၊ ဂျင်း၊ ငရုပ်ကောင်း၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ ဟင်းခပ်မှုန့် ပြုလုပ်နည်း ပထမဆုံး […]
April 22, 2020 Latest Myanmar News 0
စားတော်ပဲလေး ဝယ်ထားရုံနဲ့ ကြိုက်တဲ့အချိန် ပြုတ်စားလို့ရမယ့် နည်းလမ်း လွယ်လွယ် ကူကူ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပါပဲ။ အရင်ဆုံး ရေနွေးနဲ့ ရေအေးကို ကြက်သီးနွေးလေး ရောစပ်ပါ။ ရေထဲ လက်နှစ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်လက် အပူခံနိုင်တဲ့ အနေအထားလေးပေါ့။ ပြီးရင် အဲ့ဒီရေထဲ စားတော်ပဲကို ၃နာရီကြာအောင် ရေစိမ်ပါ။ ၃နာရီပြည့်ရင် […]
April 21, 2020 Latest Myanmar News 0
ခရမ်းချဉ်သီးယို လုပ်နည်းကိုတင်ပေးချင်လို့ အိမ်မှာ ခုပြထားတဲ့ တစ်ပန်းကန်လုံးအသေးစာတစ်လုံးပဲထိုးပါတယ် အဲ့ဒါတောင်မှ ခရမ်းချဉ်သီးက ၆၀ဆယ်သားရှိပါတယ်… ခု လိူင်ပြထားတဲ့ပုံစံမျိုး အရောင်မျိုး အရသာမျိုးလိုချင်ရင်ပေးထားတဲ့အချိုးအတိုင်းလုပ်နည်းအတိုင်းသေချာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရပါတယ်နော်… ပါဝင်ပစ္စည်း… ခရမ်းချဉ်သီး၆၀သား….. သကြား၁၅ကျပ်သား ဆား ကော်ဖီဇွန်းတဇွန်း.. ကွမ်းစားထုံး..အနည်းငယ်..တိုိ့လိုအပ်ပါတယ်… ယိုထိုးနည်း… ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ရေစင်အောင်ဆေး ပြီး ထိပ်ကနေ အောက်ကိုမပြတ်စေရ လေးစိတ်စိတ်ပါ… […]
April 17, 2020 Latest Myanmar News 0
ဘဲဥပေါင်း ၁။ ဘဲဥကိုပြုတ်ပြီး အခွံခွာထားပါ။ ၂။ ခွာထားတဲ့ဘဲဥကို ပဲငံပြာရည် ဆား အချိုမှုန့် ၊တရုတ်မဆလာ ၊ထန်းလျက်ခဲ ၊ဆီနည်းနည်း၊ ရေနည်းနည်းထည့်ပြီး ထညက်အရည်ပျော်အောင် ဖြည်းဖြည်းမွှေပါ။ ၃။ မွှေတာရေခမ်းသွားရင်တော့ ရေတခွက်အပြည့်ထည့်် ခမ်းသွားရင် နောက်ထပ်တခွက်ထပ်ထည့်ပါ။ ဒုတိယရေခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ ညိုပြီးအရသာတွေအထဲဝင်ပြီး အရမ်းစားကောင်းပါတယ်။ Food Unicode […]
April 11, 2020 Latest Myanmar News 0
မုန့်လုံးရေပေါ် ( သင်္ကြန် လက်ဆောင် ) ကောက်ညှင်းမှုန့်် 800g ( ၅၀ သားခန့် ) ၊ဆန်အစိမ်းမှုန့် 200g ( ၁၂ ကျပ်သား ) ၊ရေ 600ml ၊ဆား အနည်းငယ် ပါဝင်ပစ္စည်း ၄ မျိုးကို နယ်မယ့်ခွက်တစ်ခုထဲ […]